घरधुरी कर लिने स्वयंसेविका घर घरमा « Loktantrapost
घरधुरी कर लिने स्वयंसेविका घर घरमा
२० जेष्ठ २०७६, सोमबार १२:३०
भद्रपुर । अर्जुनधारा नगरपालिकाले महिला स्वयम्सेविकालाई जनताको घरघर पठाएर घरधुरी कर उठाउन सुरु गरेको छ । ११ वडा रहेको नगरपालिकामा ३५ स्वयम्सेविका घर घर पठाएर नगरले बनाएको मापदण्ड अनुसार घरधुरी कर उठाउन जेठ १४ गतेबाट सुरु गरेको कार्यालयका सूचना अधिकृत डेनजनी आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार गतबर्षदेखि नै घरधुरी कर लिने नौ प्रकारको मापदण्ड बनाएर नगरपालिकाले जनताकै घरमा पुगेर कर उठाउन थालेको हो । उनले फुसको साधारण घर छ भने रु. २०, टिनको छानो सेन्ट्रल बेरा गरिएको १ तला छ भने रु. ६०, टिनको छानो एक तला पक्कीको रु. ८०, पहिलो तला ढलाई गरिएको र दोस्रोमा टिनको छानो लगाएकोमा रु. १५०, पक्की घर एकतलाको रु.१५० दुई तलेको रु. २२०, तीन तलेको रु.३००, चार तले भएमा रु.४५० र चार तलाभन्दा माथि भएमा रु. ६०० का दरले घरधुरी कर उठाउने गरिएको बताए ।
उनले अन्य नगरपालिकाले एकीकृत सम्पति कर र सम्पति कर लगाए पनि अर्जुनधारा नगरपालिकाले भने मालपोत र घरधुरी कर मात्र लगाएको बताए । मालपोत भने जनताले आआफ्नै वडामा तिर्ने गरेका छन् ।
स्वयम्सेविकाहरु गाउँका कुना कुनासम्म पुगिरहेका र सबैसँग परिचित हुने हुँदा उनीहरुलाई दैनिक रु. १ हजार भत्ताको व्यवस्था गरेर काममा लगाइएको सूचना अधिकृत आचार्यले बताए । वि.सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार ६० हजार २०४ जनसंख्या अर्थात हाल ७० हजार बढी जनसंख्या र १३ हजार १३६ घरधुरी रहेको नगरपालिकाले स्वयम्सेविकालाई नगदी रसिदसहित गाउँ पठाएको छ ।
वडा नम्बर ६ मा खटिएकी तुलसा कुँवरले दैनिक ४५ घर परिवारकोमा पुगेर अनिवार्य घरधुरी कर उठाउन नगरले नियम बनाएको बताइन् । उनले सोही नियम अनुसार नै घरमूली भेटिने समय पारेर आफूहरुले काम गरिरहेको बताइन् । उनले जसको नाममा घर जग्गा उसकैको नाममा रसिद काट्ने गरेको जानकारी दिइन् । कुँवरले पहिलोपटक घर पुग्दा घर मालिक नभेटिए दोस्रोपटक पुनः जाने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीलाई सबैले चिन्नुभएको हुन्छ धेरैजसोले घर पुग्ने वित्तिकै दिइहाल्नुहुन्छ र एकाधले चाहिँ नगरपालिकामा आफैं गएर बुझाउँछौं भनेर अटेर पनि गर्छन् ।’
उनले घरधुरी कर उठाएसँगै जनतालाई पसल व्यवसाय दर्ता नविकरण गर्न, मालपोत तिर्न र घरजग्गा बहाल कर बेलैमा तिर्न समेत सम्झाउने गरेको बताइन् । सूचना अधिकृत आचार्यले गतबर्ष घरधुरी कर वापत रु. १४ लाख ५० हजार बढी रकम संकलन गरेको बताइन् ।
चालू आर्थिक बर्षको असार १५ भित्रमा घरधुरी कर उठाइसक्ने नगरको लक्ष्य छ । वडा नम्बर १, २ लाई ३० घर,३,४,५,७, ८ र ९ नम्बर वडाकालाई ४० घर र ६ लाई ४५ घर र बजार क्षेत्रमा रहेका १० र ११ नम्बर वडाकालाई दैनिक ५५ घरको घरघुरी कर उठाउन लगाइएको उनको भनाई छ ।
नगरबासी कोही पनि घरधुरी कर बुझाउन नछुटुन् र घरमै सेवा दिने उद्देश्यले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै आफूहरुले यो काम थालेको नगरकी उपप्रमुख कमला आचार्यले बताए । उनले जनताको घर घर पुगेका स्वयम्सेविकाले उनीहरुको समस्या बारे समेत जानकारी लिने र कर तिर्न छुटेकाको समेत सम्पूर्ण विवरण ल्याउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
उपप्रमुख आचार्यले झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये अर्जुनधारा नगरपालिकाले मात्र जनताको घरदैलोमा पुगेर घरधुरी कर उठाउने गरेको दाबी गर्नुभयो । यस अघि नगरपालिकाले अब बन्ने सबै घरमा अग्नी नियन्त्रक उपकरण अनिवार्य जडान गरिनु पर्ने नियम बनाएर चर्चामा आएको छ । –––